Banyere Q2 2017、nchịktantanetịmicro Ogologo iri nde mmadu iri nde mmadu n’ile ndi mmadu na-aru oru ugbua。 Nkeahụbụihedịka okpukpuanọnkendịドイツ。 Ma obu 8x onu ogugu nke Argentina。 Ma obu 32x onu ogugu nkeポルトガル.
Uto nke Twitterndịna-arụọrụna-arụọrụna Twitter（isi iyi）.
イイイイヘム？ Ọbụghịonyeọbụlana Twitter nweremmasịnagịnangwaahịagị.
Kedu otuazụmahịasi eme kandịna-ege hantịdịirè; ma rute ma na-erengwaahịaha nye onye ziri ezi na Twitter?
0.1 Tinye Twitterハッシュタグ（＃）
2.1 Ezigbo ihe omimiハッシュタグdịmfe mana-emetụta.
3 3. Ride naọnọdụndịna-adịbeghịanya
4 Ihendịọzọịga-echebara echiche
Onyedịumeala n’obi madịike Twitterハッシュタグ（＃）nyere akajikọtaazụmahịanandịna-azụahịasiten’ịkpakọtaọnọdụmaọbụisiokwu。 Nke apụtaranaịnwere ikeịbanyenaahịaahịanaahịaziri ezi.
Site naịkekọrịtaọdịnayama jiri shehtags mee ihen’ụzọdịirèna Twitter、ịnwere ikeịmepụtaahịanaịmepụtaihe mgbaruọsọmakanzukọgịna obere ego.
Tupu anyi abanye n’ime nke a、o di nkpa icheta na dika ahia、usoro izo eji Twitter ga-adighi iche na onu ahia。 Jide n’aka naịnwereatụmatụma naọna-akọwaihe mgbaruọsọdoro anya nkeazụmahịagị!
Ọzọkwa、dịka Pankaj Narang、Onye guzobere Socialert、ọnaghịarụọrụna-arụọrụndịọrụakwụụgwọnweta havehtagsトレンド。 Nke ana-emekarịkaịnwetaakụkọna-enweghịiheọbụlasiri ike na-eduban’ọgbọọganihu Kama nkeahụ、tụleeịmepụtamgbasa oziahịagịnkeọmana nkegịma na-ele ha na-eto eto site na ichebara mkpa nkendịahịagịtinyere ike nkeụlọọrụgịnangwaahịagị.
Ọna-enye akaịmekọrịtaatụmatụmgbasa ozigịdịkaakụkụnke usoroatụmatụahia。 Ebumnuchegịkwesịrịiji ihe mgbaruọsọmee kaịnweta ihe mgbaruọsọazụmahịa。 Nke a nwere ike iyintakịrịmgbagwoju anya、ma ebe a、anyịga-esogịkọọrọgịatụmatụabụọgbasaraahịahashtag nke ga-enyeregịaka.
Ndịna-eri nri taadịn’ozuzukarịakarịama na-eme ihe n’eziokwu、ha juputara na mgbasa ozi.
Nke aabụghịihedịiche na Twitter、ebeọbụnaịna-asọmpụọtụtụụlọọrụndịọzọn’ebeahụ。 Site naịmepụtaọdịnayadịmma nkena-emetụtamana-amasịmmasịn’ahịagị、ga ga-enwensịdịmmakarịaasọmpiahụ.
N’ihe banyereahịaahia、nke a dabara n’ime ebe ole na oleịga-elekwasịanya：
Ejiri ihe na-eme ihena-emetụtaihe na-eme、nkepụtarana usorondụdịmkpụmkpụmalekwasịanya。 Weredịkaọmụmaatụire ere zuru oke nkena-adịruụbọchịatọ.
#discountsdịkaanyịna-ejide kwaafọ#sale at #JCPenney ma nweta pennygị！ Nanịụbọchị3！ （ショートリンクハイパーリンク） "
Azụmahịandịdabeere na Web-basedga-abụihe ana-atụlenaụwaahịadịka "怒り".
Ihe nchekwa nkengwaahịana-elekwasịanya na iheụfọdụn’ogeọbụla.
Ewezụgankeahụ、ọna-enye aka maọbụrụnaịna-emepụtaihe n’imeọdịnayagịma tinye mgbasa ozidịmmadịka ihe oyiyi maọbụvidiyo。写真na-agwa a puku okwu na ihe screams ire eredịka：
Foto nwere ikena-ezipụozi nandịmmadụnwere ike maọbụrụna ederede ederede.
Nke aabụghịechicheọhụrụn’ụwanke mgbasa ozi naahịakamaọna-arụọrụdịkankeọmana Twitterkarịanaọdịndụn’ezie。 Twitterdịkangwáọrụmakaịmepụtaakara ahabụezigboakụdịmma ma nwee ike iji ya mee ihen’ọtụtụụzọọga-esi gbanwee obigị.
Ndịn’ozuzu hana-ekwukarịụdịahịamaọbụngwaahịaha maara。 Iheịmaaka ana-aghọịghọotu n’imeụdịndịahụ。 Site n’iji Twitter ijimepụtanjirimaragịakara、ịga-enwe ikeịbanyena mpaghara nke iheùgwùahụ.
Dịka iheatụnke a、ọga-abụnaịmaara okwudịka "Ịgaghịaga ijenaanị" maọbụ "Nwee ezumike、nwee KitKat". Ejikọtaranambụna Liverpool Football Club、ma nkeikpeazụ、nkeọma、KitKat。 Ndịaasụgharịwon’ụzọdịirèna Twitter #YNWA na #HaveABreak.
Ezigbo ihe omimiハッシュタグdịmfe mana-emetụta.
hashmepụtaハッシュタグiji mata ihe nwere ikeịbụngwáọrụdịike
Site na nchikota ndi a、ulo oru ahu nwere uzo nke ndi ngbuputa nwere ike igosi uzo ha huru uzo di iche iche ma di nma nke nani ndi mmadu nwere ike iru。 Na nkenke、ụdịahụna-eme kandịFans na-ereahịaha!
Otu ihe ijirịbaama banyere usoro an’agbanyeghịnaịga-anwale matụọanya otu esi eji ya。 Site na iche echiche site na okike nke njirimara gi maọbụakaragị、ịga-enwe ike izere ihere na-emecha mechaa.
Bill Cosby gbara mgbe ha kere ya #Cosbymemeハッシュタグ。 N’ụzọdoro anya、ha na-enwe olileanya na ha ga-eji ike nke ala hana-emepụtama mee ka hype banyere kpakpandoahụ。 O di nwute na ha、nke a bu ihe omuma nke ihe mebiri：
3. Ride naọnọdụndịna-adịbeghịanya
Nke a bara urukarịsịamaka obereụlọahịandịnwere ikeịnweghiihemgbapụnkeọtụtụndịna-eme egwuregwu na mgbasa ozi。 Oyighịkandịmmadụga-achọ#TomsPremiumSalmon、n’ihi ya enwere ike wenweta ngwa ngwa naọnọdụTwitter.
Ebembụịga-achọihe ga-eme na Twitter n’onwe ya。 Ọbụezie naụfọdụebenrụọrụweebụna-enyendụmọdụna ihendịọzọnwere ikeịbauru、Twitter ga-enweta ozikachasịmma ebeọbụna oziahụdịna alaahụ.
Kaanyịkwuo na Tomna-ahụkarịnaọbụ#fishoil。 Ihe doro anyaọga-emebụịgbakwunyenkeahụna Tweet makandụọhụrụn’anya：
"#TomsPremiumSalmonbụọhịana-ejide na a kediegwu #healthfoodọgaranyana #fishoil mana-achọ素晴らしい!
Site na isoro usoro、ịga-enwe ikeịkwaliteha mana-ebugharịakaragịmaọbụngwaahịa
Trendsmap、＃Hashtags.org、na Hastagifybụụfọdụihendịọzọna-emepụtaihendịna-emekarịkaịnwere ike ile anya.
O doro anya naọtụtụebendịọzọna-enyeọrụịkwụụgwọtinyerendịna-ewu ewu、nyocha na nyocha、n’ihi ya、ịga-ahụnkwụnyeziri ezi nkeụgọanakụanakọanakọaọnkụanankụa.
Ọbụezie naatụmatụdịnaハッシュタグnwere ikeịmepụtandepụtankedịogologoキロミタ、e nwereụfọdụihendịdịmkpa iji buru n’uchemkpokọtamgbeịna-arụTwitter.
ミーカハゴ。 Ọbụrụnaịgaghịenwe ike imeli oge zuru ezu、ọdịkarịaalatụleeịmekọrịtaotu onye nwereahụmahụmadịnjikereịrụọrụgịna mgbasa ozi nkeenweghịonwegị.
Buru n’uche naツイートgịna-echekarịbanyereazụmahịagị。 Ọbụrụnaịna-atụanya kandịna-ereahịagịbụrụndịọkachamara、mgbeahụ、atụlaanya na gaga-erughịala na onyena-adọrọmmasịgị。 Twitter makaazụmahịaabụghịnaanịihe a na-eme "naanịn’ihi na onyeọbụlana-eme ya", maọbụihe ngosi nkeazụmahịagịna ebenrụọrụweebụmgbasa ozi.
Sochiensonaazụmgbasa ozigịna stats
Na njedebe nkeụbọchị、laghachi na isi ihe、nkebụicheta ihe mere i jinọrọna Twitter。 Ozugboịmalitere Tweeting na-esote（atụanya）nkeọma、ọbụoge ijimụtaotúọdịirèハッシュタグgị.
N’ebe a、ọdịmkpaịgharaịdaba ‘ọnyàefu’。 Nke apụtaranaịga-ekpe ikpe maọdịirèdịirèsite n’ile anya metricsdịarọdịkanchọkwandịmepụtara、ọnụahịaahịanaọnụegomgbanwe。 Nke abụihe ikeazụmahịagị、ọbụghịọnụọgụgụnkemmasịmaọbụre-tweetịnweta.
サイトn’ịgbasonọmbaahịadịkamgbasa oziahịaTwittergị、ga ga-enwe ikeịmepụtafoto nkeọrụna ihena-adịghị。 N’ebe a、ịga-achọpụtana ihekachasịewu ewu、ọbụghịmgbe niilebụihekasịmma makaazụmahịagị.
Iji mee nke an’ụzọdịmfekarị、ịnwere ikeịmasịijiụfọdụn’ime Jason n’imeatụmatụna hacks na ederede a.
Ọzọkwa-enwereọtụtụngwa freemium nke na-enyeregịakaịdebenyocha nkearụmọrụnkemkpọsatwittergịma gbarie ya n’imenrụrụsiri ike makagị。 Hootsuite、Ndịna-arụọrụna-elekọtammadụ、na Hashtrackingbụụfọdụnaịnwere ikeịnwale.
Imirikitisaịtịndịa na-efuụfọdụego、ma chee naọbụego n’imeahịamgbasa ozigị。 Ekwuwerị、ọbụna egoagaghịakwụgịụgwọ?
Na njedebe nkeụbọchị、atụlaegwuịlaghachina ntanyeọbịbịamaọbụrụnaịchọtalanaahịaazụmahịagịadịghịarụụrụ。 MGBEụfọdụ、ụzọkachasịmma maka iji eriri eji eme ihega-abụiheịgankeọma.
Ugbu a naịnwere echiche nke otuツイートnwere ike isi mee（maọbụịkwụsị）azụmahịagị、ga ga-enwe ikeịghọtakpọmkwemotúusoroịzụahịahashtagdịmkpa。 Na-echeta mgbe niile na ahagịbụinye ezigboahịagịahịanaụdịụfọdụmaọbụọzọ.
Jide n’aka jiri havehtags jiri amamihe mee ihe majikọtaha naツイートka hadịmma、ma n’otu ogeahụna-enweta uruahịa.
Na-adịgideadịgide、nọrọna-emekọiheọnụ、ma geendịna-egegịntịntịmgbe ha nagịna-akpakọrịtanaanyịna-emesigịobi ike、dịka Liverpool、#YNWA.
maara na e nwere ọtụtụ narị ọrụ nchịkọta dịịrị anyị. N’etiti ha nile 님이